एकै जना मानिसको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती – Dailny NpNews
एकै जना मानिसको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०४, २०७७ समय: १७:२३:५४
एजेन्सी / एउटा पुरुषको श्रीमती एउटा नै हुन्छ । कसैकसैले २ देखी तीसम्म बिहे गरेको हामीले देखेका र सुनेका छौं । तर कोहि मानिसको १३ जना श्रीमती हुनसक्छ ? अवश्य सक्दैन ।मानिलिउँ १३ जना श्रीमती भएपनि के ती १३ जना श्रीमती एकैसाथ गर्भवती हुन सक्छन् त ? पक्कै सक्दैनन् । तर यो असम्भव सम्भव भएको छ । सुन्दा देख्दा र पढ्दा आश्र्चय लाग्ने यो कुरा साँचो हो ।
प’त्याउनै गाह्रो हुने यो घ’टना नाइजेरीयाको हो । जहाँ एक श्रीमानले आफ्नी १३ श्रीमतीलाई एकैसाथ गर्भवती बनाएका छन् । १३ वटी श्रीमतीहरुलाई एकैपटक गर्भाधारण गराएर नयाँ रेकर्ड राखेका उनले यस घ’टनाले आफु निकै उत्साहित भएको जनाएका छन् ।
उनकी १३ श्रीमतीहरुको गर्भाधारण पाँच हप्ताको अन्तरमा छ ।अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यी सबै श्रीमतीहरु एकै ठाउँमा बस्दछन् ।र उनीहरुबीचमा निकै आत्मियता छ । १३ श्रीमतीका श्रीमान्ले आफ्ना सबै श्रीमतीलाई एकआपसमा बराबर माया दिएर राखेका छन् ।
यतिसम्म कि विवाहपछि आजसम्म उनीहरु बिचमा कहिल्यै मनमुटाव र झ’गडा भएको छैन । बडो गज्जब छ, जहाँ दुई जनासंगको प्रेम मिलाउन मानिसलाई ग्राहो हुन्छ । यहाँ यी मानिसले १३ श्रीमतीलाई मिलाएर राख्ने मात्र होइन एकैसाथ गर्भवती समेत बनाएका छन् ।
७६२ पटक हेरिएको